नेपालबाट अष्ट्रेलिया गएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भएको पु’ष्टी – Life Nepali
नेपालबाट अष्ट्रेलिया गएका एकजना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भएको पु’ष्टी
तास्मानिया। गत फरबी २६ मा नेपालबाट आएका अष्ट्रेलियाको ता’स्मानिया बस्ने एकजना २० बर्षमाथिको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । उनी सिंगापुर र सिड्नी ट्रा’न्जिट भएर तास्मानिया गएको जनाइएको छ ।उनलाई फरबरी २७ मा नै रुघाखोकीको जस्तो ल’क्षण देखिएपनि उनले मार्च ६ सम्म ह’टलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेका थिएनन् । शुक्रबार उनको रो’यल हो’बर्ट अस्पतालमा प’रीक्षण गरेपछि आइसोलेसनमा बस्न भनिएको थियो । तर उनले त्यसको अ’वज्ञा गरेका थिए ।आइसोलेसनमा बस्न भनिएपनि उनी अर्कोदिन काममा गएको जनाइएको छ ।
आइसोलेसनमा बस्न नमानेका उनको शनिबार प्राप्त रि’पोर्टमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । त्यसपछि उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ ।ता’स्मानियाका जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर मा’र्क भे’इचले आइसोलेसनमा बस्न नमान्ने ती व्यक्तिको हर्कत अस्’वीकार्य भएको बताएका छन् । ती व्यक्ति अष्ट्रेलियन आ’इडिल कलेजका विद्यार्थी रहेको जनाइएको छ ।उनले ग्रा’ण्ड चा’न्सलर होटलमा पा’र्टटाइम काम गर्ने गरेको जनाइएको छ । अधिकारीहरुले उनको नजिकको सम्पर्कमा आएका होटलमा काम गर्ने अन्य कामदारहरुबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
कम्तीमा १५ मिनेटसम्म फेस टु फेस हुने वा एउटै कोठामा २ घण्टाभन्दा बढी बस्नेहरुलाई नजिकको सम्पर्कका रुपमा लिइने जनाइएको छ । यो प’रिभाषाभित्र पर्ने हरेकले १४ दिन अनिवार्य सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ ।तीनजना घरमा बस्ने साथीहरु र अर्को एकजना व्यक्तिलाई नजिकको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिका रुपमा ठा’निएको छ । उनीहरुलाई आ’इसोलेसनमा बस्न भनिएको छ ।नेपालबाट गएका भनिएका यी व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण कहाँ भयो भन्नेबारे केही खुलेको छैन । साथै उनी को हुन् भन्नेबारे पनि केही खु’लाइएको छैन ।
Previous शान्ति सेना धेरै पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा
Next कतारमा कोरोना भा’इरस सं’क्रमितको संख्या १५ पुग्यो’
दु’खद ख’बर : बिहेमा दाइजो कम दि’एको भ’न्दै ८ महिनाकि ग’र्भवती मनजिता कौ’रको ह त्या (भिडियो)
इष्ट लण्डनमा कार्यरत ७० बर्षका नेपाली डाक्टर नारद पाण्डेको नि’धन
मृतकका परिवारले पाए १ करोड ३२ लाख बीमा दाबी भुक्तानी
१० नेपालीद्वारा देशको झण्डा फहराउँदै विश्वको दोश्रो अग्लो के टू हिमालको सफल आरोहण, विश्व रेकर्ड कायम !
कार पुलबाट तल ख’स्यो तर यो खस्न भन्दा १० मिनेट अगाडिको घ’टनाले बनाउने छ चकित !
घ’ट्यो-घ’ट्यो ए’क्कासि ह्वातै घ’ट्यो सुन चा’दीको मू’ल्य’
8 hours ago kriti
9 hours ago kriti
11 hours ago kriti